Fikradaha Qolka Jiifka Ee Loogu Talagalay Lamaanayaasha - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Fikradaha Qolka Jiifka Ee Loogu Talagalay Lamaanayaasha
Lammaanayaal kala duwan waxay leeyihiin waxa ay ku sameeyaan qolka jiifka, laakiin asal ahaan waxaa jira waxyaabo qaas ah oo gaar ah oo qolka jiifka u leeyahay lamaanayaasha.
Qolka jiifka waa meel muhiim ah oo lamaane kasta ay tahay inay si habboon uga faa’iideystaan. Waxa labada qof ku sameeyaan qolka jiifka waxay wax badan ka sheegi karaan midowgooda.
Lamaanayaasha ayaa qolka jiifka ka dhigan karaan meel ay ku sameystaan waxyaabahaan.
1. Meel lagu nasto
Qolka jiifka waa inuu ahaadaa mid raaxo leh iyo meel fiican oo lagu nasto shaqada maalinlaha kadib. Sariirta iyo barkimooyinku waa inay ahaadaan kuwo raaxo leh, qolka jiifka waa inuu had iyo jeer hagaagsan yahay oo uu noqdaa mid si wanaagsan looga shaqeeyay.
2. Meel lagu wada hadlo
3. Meel qorshe lagu sameeyo
4. Meel lagu xaliyo khilaafaadka
5. Meel si weyn loogu raaxeysto
6. Meel lagu maadsado
Signs you could be having breast cancer